Efa niezaka amin’ny teny alemà Tags amin’ny Omegle ary maro alemana Chatroulette toerana, fa ny toerana toy ny, Manidina Uwe, efa tsy hita. Inona Chatroulette izy dia ampiasaina tsara. Tena leo aho, ary izaho ao amin’ny Laptop. Aho te-hianatra ny olona hafa mba fantatrao, sy ny sisa omegle. ny Olana hitako dia misy na inona na inona izay mety antso ho an’ny fametrahana ny fakan-tsary. fa misy ny toerana tsy manana ny hametraka na inona na inona mbola nilasy sy chat. afaka mampiasa izany amin’ny olona maro, omegle amin’ny alalan’ny Splitscreen. ka mahita ny mitovy amin’izany isika vahoaka sy ny roa antsika. raha mihazakazaka ny fakan-tsary fandaharana amin’ny Solosaina findainy misokatra ny asa ny fakan-tsary (tsy tapaka). na izany aza, Internet tranonkala toy. chatroulette fotsiny mainty efijery na dia nanery hamela. Afaka jmd.
PS misy fandaharana hafa dia ny fampiasana ny webcam. Efa Webcam (Windows). Na izany aza dia ny Cam tsy miasa raha izaho no eo amin’ny Omegle. An-tsaha ity dia avy eo aho, tokony hamela aho raha toa ka afaka mampihetsika ny Webcam na famahanam-bolongana — raha efa nitranga mba hamela ny fanerena anjara iray:-na dia ny sehatra hafa aza.
tsy. Misaotra anao. nisy namana iray nilaza tamiko tamin’ny taon-dasa ny pejy, toy ny Chatroulette na Omegle, dia afaka nandritra ny lahatsary internet vola fanomezana avy amin’ny mifanohitra amin’izany. Misy mahalala ve ireo toerana toy izany. Aho mitady chat vavahadin-tserasera, izay afaka manoratra amin’ny olona, isa azo ampifanakalozina sy ny sisa. Tsy voatery Mampiaraka toerana. Fa azafady, tsy misy Omegle, Chatroulette, na Knuddels. Raha tsy izany, dia miandrandra ny soso-kevitra: manao ahoana, inona no zavatra Youtuber afaka manoro ahy izay tena sosialy sy malaza. Ka Youtuber amin’ny tena ambony ara-tsosialy ny fahaiza-manao. marina ve fa Deutsche Lahatsoratra mpiasa mahazo ny lisitra, tao amin’ny vaovao ny asa akanjo afaka manapaka sy misafidy. hey aho tena leo sy te-hanao izany toy ny omegle noho izany, amin’ny hafahafa ny olona, tsy mba hiresaka saingy indrisy, tsy mahatakatra izany tsara ny teny anglisy ary izany no antony izaho mba te-hanontany raha misy ny zavatra toy ny omegle ny toerana ihany no Alemà, na dia efa afa-tsy ny Alemà na ny Rosiana) ve ianao ry zalahy Mahafantatra ny raha na ny fomba ianao dia afaka boky mivantana debit an-tserasera ao amin’ny Deutsche Bank. Mivantana eo amin’ny jiro, dia mazava, na izany aza, tsy tiako ny ho foana ny handeha ho any ny jiro, satria izany no mahamenatra. Amin’ny Sparkasse, dia afaka boky mivantana debit online indray ilay vola avy hatrany hiala. Fa tsy maintsy mandeha araka izany, saingy, na izany aza, ao ny raharaha ny zavatra Banky. Iza no mahalala ny fomba hanaovana izany tsara. Na iza na iza nitsidika ireo pejy ireo ianao. Inona no afaka milaza amiko ny momba azy lazao. Aho hiezaka izany koa tia Cam sy ny toy izany, saingy ho ahy, kely sarotra, manahirana, sy ny sisa. ary tsy misy, tsy midika inona izany meloka Linge atao any. Aho mahita ny hevitra hoe ny toerana toy izany raha ny marina tsara, fa misy ihany koa izay mety hampisaraka anareo-firaisana ara-nofo. Handeha aho indraindray ho an’ny voly amin’ny Omegle ary soraty ao Tags toy ny ‘mozika’ na ‘Hessen’, nefa avy eo dia ny hafatra izay lazaina fa tsy misy mpampiasa omegle dia tsy mampiasa ireo Tags. Enga anie ity pejy ity ihany Malagasy teny nalaina an-kaonty. Raha izany no izy, dia misy zavatra toerana izay toy ny Omegle (ary mety ho lehibe). Amin’ny lafiny afaka hiresaka avy Zych ny olona manerana izao tontolo izao tsapaka, amin’ny Teny, na amin’ny alalan’ny Webcam. Nanana fijery roa andro tao amin’ny roa tonta, (Tsy misy ny fakan-tsary) sy tsara tarehy aho tohina. Ny olona sasany dia efa nivadika fotsiny fa mila mampiseho maharikoriko zavatra hafa ny olona. Izaho koa nahita kely ny ankizivavy. Ankehitriny, rehefa kely ny ankizivavy miditra amin’ny lehilahy amin’ny fifandraisana amin’ny fakan-tsary, dia afaka hisolo ny iray niaraka tamin’ny zazavavy adiresy, ary na inona na inona ho atao. Ary sahiko ny miloka, na izany aza, na inona na inona no atao ny mpandrindra ity pejy ity. Toerana toy izany dia tokony ho voarara satria zaza tsy ampy taona afaka ny ho tonga any hifandray amin’ny meloka olon-dehibe, ary koa efa nivadika ny zavatra hitako, ny zavatra ny bandy dia manao misy. ny fanontaniana mipetraka dia inona no CB fantsona onjam-peo ampiasaina indrindra ny Alemà ao ETSMP
← Inona avy ny fanontaniana mba hanontany, rehefa mihaona ny tovovavy ho an'ny handamina ny fanambadiana ho an'ny fotoana voalohany. Indiana Mampiaraka
Top Fomba Hahatonga ny Vehivavy Iray ao amin'ny Fivoriana Voalohany →